आफ्नै सरकारका मन्त्रीमाथि खनिए योगेश भटराई, यस्तो बजेटले कसरि आउँछ समाजवाद ? || सुनौलो नेपाल
आफ्नै सरकारका मन्त्रीमाथि खनिए योगेश भटराई, यस्तो बजेटले कसरि आउँछ समाजवाद ?
जेठ ३० काठमाडौं सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् सांसद योगेश भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट अपुग भएको बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद पोख्रेलले समाजवादमा जानको लागि शिक्षामा लगानी बढाउनैपर्ने बताएका हुन्।
शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने विश्वव्यापाी मान्यता भए पनि नेपालमा त्यसो हुन नसकेको टिप्पणी गरे। उनले भने देशलाई समाजवादतर्फ लैजाने हो भने शिक्षामा क्रान्ति जरुरी हुन्छ। तर मन्त्रीज्यूहरु यति किलोमिटर कालोपत्रे भयो भनेर भौतिक संरचनाको प्रगति प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ।
कूल बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत बजेट शिक्षामा हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता भए पनि सरकारले १० दशममलब ६८ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। यसैगरी जिडिपीको ६ देखि ८ प्रतिशत शिक्षामा लगानी हुनुपर्ने भए पनि अहिले ४ दशमलब ६ प्रतिशत मत्रै भइरहेको भन्दै सुधार्न सुझाए। उनले भने शिक्षा समग्र विकासको पूर्व-सर्त हो। शिक्षामा लगानी बढाउनैपर्छ।शैक्षिक क्षेत्रको गरिमा दिनानुदिन घटेको उल्लेख गर्दै उनले जहाँ विश्वविद्यालयले साख गुमाउँदा शैक्षिक क्षेत्रले साख गुमाउने र शिक्षक अपमानित हुने देश सम्बृद नहुने धारणा राखे।
यसै गरि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले २ वर्षको बीचमा उच्च माध्यमिक तहमा मात्र १० लाख ४४ हजार विद्यार्थी हराएको बताएका छन्। आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले यस्तो बताएका हुन्।बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले भने ०६४ सालमा १ कक्षामा १३ लाख विद्यार्थी भर्ना भएकोमा अहिले ०७६ सालमा १२ कक्षाको परीक्षा दिँदै गर्दा २ लाख ९० हजार मात्र बाँकी रहे। १० लाख ४४ हजार विद्यार्थी हराए। विद्यालयमा नटिक्ने विद्यार्थीहरु कसका छोराछोरी हुन् तपाईंहाम्रा पक्कै होइनन् ।
बिहि, असार १, २०७६ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस